1007 Pratt Road # 4, Mactier, Ontario P0c1h0
Real Estate Listings: » Residential homes » Cottages » CA » Ontario » Mactier » 1007 Pratt Road # 4, Mactier, Ontario P0c1h01
Canada, Ontario, Mactier,
Ikhodi Yokuposa: P0c1h0
Le 3000 sf 5 bedroom 3 cottage cottage, noma ikhaya eligcwele, itholakala ethekwini elithulile eLake Joseph enyakatho neFoots Bay. Kukhona ukufinyelela okulula okuvela eToronto ngeHighway 400. Le ndawo inendawo engaphambili engamamitha angu-105, enendawo eyodwa yokutshuza, kodwa ubukhulu bendawo yakwamakhelwane eyakhiwe ngasenyakatho buhlinzeka ngemfihlo engaphezulu kwamamitha angama-300 kulelo hlangothi, zombili ngaphambili kwamanzi, nasezingeni lekotishi. Ikotishi lagcina ukungezwa ngo-1987 futhi lidinga ukuqeda futhi livuselele. Amakamelo amakhulu avulekile ngokwanele ukuxhasa umndeni omkhulu onezivakashi eziningi. I-septic ilinganiselwe amakamelo okulala ama-4. Kukhona nehhovisi eliphansi eliphansi negumbi lokugcina / igumbi lomntwana / ihhovisi lesibili ezingeni eliphezulu. Ungaphuthelwa ukubona leli thuba elihle lokuthola ikhaya elihlala njalo noma ikotishi lasebusika eLake Joseph elihle. (id: 27) Izici ZokwakhaImishini: Isisheli, Umshini wokuwasha izitsha, Isitofu, Isomisi, iMicrowave, isiQinisekisiBasement Development: Uhlobo oluqediweBasement Type: FullBuilding Type: HouseConstruction Style - Attachment: DetachedCooling Type: NoneExterior Finish: Vinyl sidingFireplace Type: InsertFoundation Type: Block
Pratt Road #4